भूकम्प आउँदा गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको आफ्नो ज्यान बचाउनु हो । भूकम्प आउँदा डेस्क, टेलबमुनि लुक्नुपर्छ, ढोका तल उभ्भिनुपर्छ आदि सुन्दै, पढ्दै र देख्दै आइरहेकाछौँ । संसार भरि नै भूकम्प आउँदा यस्तै गर्नुपर्छ भनेर सिकाइन्छ, पढाइन्छ । रेडक्रस लगायत विश्व समूदाय ले यसैलाई ज्यान बचाउने प्रमाणित सिद्धान्त मान्दै आइरहेकाछन् ।
आज एउटा नेपाली ब्लगमा, ‘यो तरिका त ज्यानमारा हो, ट्रयाङ्गल अफ लाइफ’ मात्र ठिक हो भने जसरी ब्लग लेखिएको रहेछ । ‘डाउग कप’ को ‘विवादास्पद सिद्धान्त’ लाई आधिकारिक मान्दै, डेस्क, टेबल को तल भन्दा छेउ मा बस्नुपर्ने सुझाइएको छ । अझ भूकम्प आउँदा खाटमुनि हैन, खाटछेउ मा बस्नु भनेर सुझाइएको रहेछ । जति जति पढ्यो, उति उति उल्टो लाग्दैगयो, त्यहाँ लेखिएका कुराहरु ।
अपवादहरु जहिँ तहिँ हुन्छन् तर एक-दुइवटा ठाउँको उदाहरण दिँदै यही नै ठिक हो भनेर किटान गर्न सकिँदैन । भूकम्प आएको समयमा यस्तै गर्नुपर्छ, यस्तै हुनुपर्छ र यस्तै हो भनेर भन्न कठिन छ । यो ब्लगमा भूकम्प आउँदा यसै गर्नुस् भनेर सुझाव दिन त सक्दिन, तर ‘ट्रयाङ्गल अफ लाइफ’ सिद्दान्त भन्दै यसैको पछि नकुद्न आग्रह गर्छु । भूकम्प जुन कुनै बेला आउनसक्छ र त्यसबेला तपाई जहाँ कहिँ पुग्नु भएको हुनसक्छ । अत: तपाई को पहिलो प्राथमिकता हो, जसरी हुन्छ आफ्नो ज्यान बचाउनु !
भूकम्प को बारेमा चर्चा हुँदा अफिसका सहकर्मीले हिजो एउटा फोटो पठाएका थिए । प्रस्तुत फोटोमा ‘डाउग कप को विवादास्पद सिद्धान्त’ र 'विश्वभरी अंगाल्दै आइएको सिद्दान्त’ को बारेमा तुलना गरिएको छ । लेखिएका कुराहरु सबै पढ्नुस् अनि आफैँ निर्धारण गर्नुस्, भूँइचालो आएको बेला तपाई कसरी सुरक्षित हुनसक्नुहुन्छ भनेर !
‘विवादास्पद कुरा मान्नुहुन्छ वा प्रमाणित कुरा मान्नुहुन्छ’? मेरो बारेमा सोध्नुहुन्छ भने, म चाँही ‘Drop and Cover’ प्रमाणित विधि नै सही ठहर्याउँछु !
भूकम्प आउँदा अपनाउनुपर्ने केही सावधानीका कुराहरु यहाँबाट डाउनलोड गरेर पढ्नसक्नुहुनेछ ।